(क्राचल्ल बाट पठाईएको)
क्राचल्ल खस राज्यको राजा थिए । उनी राजा क्राधिचल्लका छोरा थिए । त्यसैले सिंजाको गद्दीमा क्राधिचल्ल पछी क्राचल्ल बसेका थिए । राजा नागराजपछी खसप्रदेशमा शक्तिशाली राजा क्राचल्ल थिए । राजा क्राचल्लले वि.सं. १२६८-१२८० सम्म शासन गरेका थिए ।
राजा क्राचल्लले वि.सं. १२८० मा नागराजको दखलपछी मुक्त हुन चाहेको कुमाउँमाथि आक्रमण गरि ठूलो युद्ध मोले । त्यस युद्धमा धेरै मानिस मारिए । अन्त्यमा खस सेनाको कुमाउँमाथि विजय भयो । त्यस विजयको खुसियालीमा राजा क्राचल्लले कुमाउँमा बालेश्वरको पुरानो ढाँचा को बदली नयाँ मन्दिर बनाए । सो मन्दिरको नित्यपूजाको सुव्यवस्था मिलाएर राजा क्रचालले अभिलेख पनि राख्न लगाए ।
राजा क्राचल्ललाई कुमाउँमाथि आक्रमण गर्दा खस राज्य भित्रका आठ सामन्त तहका राजा माण्डलिक र दुई राउत राजाहरुले खुलेर सहयोग गरेका थिए । त्यो कुरा बालेश्वर मन्दिरको अभिलेख बाट थाहा पाइन्छ । राउतराजा र माण्डलिकहरू राजा क्राचल्लका सहयोगी थिए ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=राजा_क्राचल्ल&oldid=772253" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:५६, ५ मार्च २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।